Tababare Solskjaer oo digniin u diray kooxaha Premier League-ga kaddib bandhigii wacnaa ee Pogba kulankii xalay. – Garsoore Sports
Tababare Solskjaer oo…
Tababare Solskjaer oo digniin u diray kooxaha Premier League-ga kaddib bandhigii wacnaa ee Pogba kulankii xalay.
Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa digniin u diray kooxaha kula tartamaya horyaalka PL-ga isagoo u sheegay in Pogba uu qaab-cayaareedkiisii wacnaa kusoo laabtay.
Sannadihii ugu dambeeyay qaab-cayaareedka Pogba ayaa ahaa mid aad u liita maadaama ay galaafteen dhaawacyo islamarkaana uu awoodi waayay inuu qaabkiisii wacnaa dib u helo, taasoo sabab u noqotay in si joogto ah loola xariiriyo inuu isaga dhaqaaqo garoonka lagu naaneeso ‘masraxa-riyada’ ee kooxda Manchester United.
Si kastaba ha noqotee kulankii xalay ay kooxdiisa Man United wajahday kooxda Fulham ayuu dadkii illowsanaa tayadiisa tusay waxa uu yahay.
Wuxuu dhaliyay gool cajiib ah, isagoo kubbada xakameeyay, jeestay islamarkaana lugtiisa bidix ku dhaliyay goolka guusha ee kooxdiisa Man United oo 5daqiiqo iyaddoo mareysa cayaarta looga hormaray hoggaanka.
Cayaartan oo 2:1 kusoo idlaatay ayuu tababaraha kooxda Manchester United digniin u diray kooxaha kula xifaaltamaya horyaalka inay iska ilaaliyaan qatarta soo ifbaxaysa ee Paul Pogba.
“Paul wuxuu ku raaxeysanayaa kubbada cagta, maskax ahaan aad ayuu u faraxsan yahay, jir ahaan wuxuu ku jiraa qaab aad u wanaagsan, waana ognahay wax walba oo ku saabsan tayadiisa,” ayuu yiri Solskjaer (oo la hadlayay The Guardian).
“Xilligeygii, waxaan lugteyda bidix ku dhaliyey goolal wanaagsan, laakiin uma wanaagsana sida goolka Pogba, kama aanan dhalinin meel goosha ka baxsan 25 yaardi. Wuxuu ahaaa gool cajiib ah.’
“Marwalba waxaan dhihi jirnay Paul Pogba wax walba wuu sameyn karaa, wuxuu ka ciyaari garbaha, khadka dhexe, wuxuu abuuri karaa fursado wuxuuna dhalin karaa goolal. Runtii wuu yimid. Muhiimada ayaa ka ahayd inuu taam ahaado. Maanta khadka dhexe aad ayuu shaqo fiican uga qabtay, taakalo ayuu helay iyo sidoo kale gool cajiib ah. ”
‘Kooxda Serie C-da’ ee fadeexeysay Real Madrid’ -Warbaahinta Spain oo ku maadeestay tababare Zidane iyo kooxdiisa.